Izahay dia mizaha toetra ny vokatra Huawei vaovao ao amin'ny "trano mahira-tsaina" | Androidsis
Michael Hernandez | | Huawei, Finday
Amin'ny fotoanan'ny COVID miaraka amin'ny fisorohana dia azo atao daholo ny zava-drehetra. Huawei dia nahita fa tokony hanonona anay amin'ny fepetra fiarovana rehetra azo antenaina avy amin'ireo orinasa ireo mba hahafahanay mahatsapa ny vokatra vaovao, satria efa natao nandritra ny fiainantsika rehetra izany, ary holazainay aminao ny momba ny zavatra niainantsika .
Ny fifandraisantsika voalohany amin'ny Huawei Watch Fit, FreeBuds Pro ary ny Watch GT 2 Pro dia namela tsiro tsara ho antsika, mahita azy ireo miaraka aminay. Mitohy tsy azo sakanana ny orinasa sinoa, mitazona ny tondrozotra misy azy amin'ny resaka fampisehoana vokatra manoloana ny taona sarotra 2020 izay efa mifarana.
1 Fijery: Watch Fit and Watch GT 2 Pro
2 Feo: FreeBuds Pro sy FreeLace Pro
3 Sound X sy fampidirana tanteraka
Fijery: Watch Fit and Watch GT 2 Pro
Tamin'ny Watch G2 Pro no nahitanay ny vokatra "premium" izay antenainay, ny fifandraisanay voalohany dia tsara indrindra, ny kalitaon'ny famaranana dia tsy nitsahatra nampitolagaga anay, ny lanja, ny tadiny ary ambonin'ireo asany rehetra io. Manana metatra oksizenina isika, 14 andro fizakan-tena, maodely fiofanana mihoatra ny 100 ary endrika tsy mamela olona tsy hiraharaha. Vetivety dia ho hitanao ny fanadihadianay lalina, pesto fa efa eo am-pitsapana azy izahay. Azo antoka fa hampatsiahy antsika ny antony anisany iray amin'ireo smartwatches amidy indrindra eny an-tsena.
Jereo ny GT 2 Pro
Amin'ny lafiny iray, dia gaga aho tamin'ny Watch Fit vaovao, famantaranandro maivana indrindra miaraka amina endrika mahitsizoro izay manintona ahy indrindra. Mazava ho azy fa natao ho an'ny fanatanjahan-tena, miaraka amin'ny maody fiofanana 96. Afaka nametraka azy ireo tamin'ny fitsapana tamin'ny milina famonoana izay nomanin'n Huawei ho anay izahay ary aiza no hanaiky fa tsy nanolotra valiny mahavariana manokana aho, efa teo ny Huawei's Watch GT 2 Pro hampatsiahy ahy. Ny vidin'ny Watch Fit dia 129 euro fotsiny ary tsy isalasalana fa hitazona azy io ho eo an-tampon'ny varotra raha jerena ireo lafin-javatra ilaina toa ny GPS.
Feo: FreeBuds Pro sy FreeLace Pro
Mikasika ny feo, Huawei dia nanazava tamin'ny FreeBuds 3 fa tsy tokony hialona ireo marika malaza hafa izy io, na izany aza, mbola nanana ny tsilo ihany ny fanomezana ny mpanjifa rafitra fanafoanana tabataba tena miavaka. Amin'ity tranga ity, ny redesign izao dia manolotra pads ary rafitra fanafoanana ny tabataba manan-tsaina hatramin'ny 40db, zavatra tokony horaisina. Ny fitsapana anay dia tena nahagaga tamin'ny ambaratonga samihafa amin'ny fanafoanana ny tabataba sy ny fahitana am-pahendrena ny feo fanairana eo ambany fifehezan'i Miguel Morales.
Manana famandrihana tsy misy tariby 2W, Bluetooth 5.2 ary antena avo roa heny izahay mba hahazoana tsara kokoa. Ary miaraka amin'ny toetra mitovy aminy dia tonga ny FreeLace Pro, ireo headphone hybrid natao ho an'ny atletika indrindra. Ny rafitry ny fifandraisana amin'ny alàlan'ny USB-C (izay miampanga azy ireo ihany koa) no manasongadina hatrany. Samy manana fiara 14mm malala-tanana ary amin'ny tranga misy ireo FreeLace dia hanana playback 24 ora tanteraka. Amin'izao fotoana izao dia tsy afaka manome anao ny vidin'ny vokatra sy ny misy any Espana izahay, saingy heverina fa hananantsika azy ireo ao amin'ny fantsona miaraka amin'ny famerenanao tsy ho ela.
Sound X sy fampidirana tanteraka
Notsapainay voalohany ny mpandahateny marani-tsaina an'i Huawei, fantatra kokoa amin'ny anarana hoe Sound X, ary koa andian-vokatra vaovao mikendry ny hahatonga ny fiainantsika isan'andro ho mora kokoa ao an-trano amin'ny fomban'ny mizana hendry, borosy nify ho avy izay mbola tsy eo am-pamokarana ary maro hafa. Ny valiny dia ny Huawei dia nahatratra ny haavon'ny fampidirana anelanelan'ny vokatra izay tsy isalasalana fa mampiakatra ny famokarana sy ny toetran'ny trano mifandray. Ny Sound X dia manolotra feo mazava sy mahery, mihoatra ny ampy ho an'ny efitrano sy miaraka amina manokana fihetseham-po mikasika ny vokatra Huawei hafa.
Mandritra izany fotoana izany, mbola miandry ny vaovao isika MateBook X sy MateBook 14 izany dia hohalalinina tsy ho ela ireo mpiara-miasa avy amin'i Actualidad Gadget. Araho hatrany satria manana zavatra maro holazaina aminao izahay momba ny Huawei ary tsy te halahelo azy ireo ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Izahay dia mizaha toetra ny vokatra vaovaon'i Huawei ao amin'ny "trano mahira-tsaina" anao
'Ny tiako mandrakizay' no vaovao ao amin'ny Spotify hizarana ireo hira sy podcast tianao indrindra